बालेन शाह, राजेश हमाल, रवि लामिछाने, बिजय लामा र ज्ञानेन्द्र शाहिले देश हाक्ने निश्चित! - samachar
Home > समाचार > बालेन शाह, राजेश हमाल, रवि लामिछाने, बिजय लामा र ज्ञानेन्द्र शाहिले देश हाक्ने निश्चित!
काठमाडौ। नेपाली चलचित्र उद्योगका महानयक हुन् राजेश हमाल। राजेशकै समकालीन करिश्मा मानन्धरले दुई पटक राजनीतिक पार्टी प्रवेश गरिसकेकी छन्।
त्यस्तै, अभियानत्ताबाट आफ्नो परिचय दिएका ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी मा प्रवेश गरे पछि राप्रपामा नया अयाम आएको छ। देश भरी बाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर उनका समर्थकहरुको प्रवेश गर्ने ठुलो जन लहर चलेको देखिन्छ। हाल उनी राप्रपाको प्रबक्ता भै काम गरिरहेका छन्।
हिजो मात्रै ज्ञान बहादुर शाहिले संचारकर्म छोडी अब, आजीवन राजनितीमा लाग्ने प्रण गरेका रबि लामिछानेलाई बधाई दिएका थिए। र उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा स्वागत छ, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल हाम्रै पालामा मिलेर बनाउनुपर्छ।’
म ग’र्भवती बन्न चाहान्छु तर
पल शाहसँग बिबाह गर्न चाहन्छु: उषा